Ny mpanjaka Andriambavy dia nanao fanambarana mampalahelo momba ny fahafatesan'ny vadiny hatramin'ny 1947
Home » Vaovao momba ny fizahan-tany an'ny governemanta sy ny sekolim-panjakana » Ny mpanjaka Andriambavy dia nanao fanambarana mampalahelo momba ny fahafatesan'ny vadiny hatramin'ny 1947
Aprily 9, 2021
Tsy sanatria manelingelina ny fandefasana azy ny BBC sy ny TV sy radio rehetra any Angletera. Androany no nitrangan'izany rehefa nanambara ny fahafatesan'ny Printsy vady malalany Prince Philip ny mpanjaka. Ny mpivady mpanjaka dia nanambady hatramin'ny 1947.
Notapahan'ny BBC ny fandaharany androany vao maraina mba handefasana ity fanambarana manandanja ity avy amin'ny Her Majesty the Queen.
"Amin'ny alahelo lalina no nanambaran'ny Mpanjakavavy Mpanjakavavy ny fahafatesan'ny vady malalany. Izy no vadin'ny mpanjaka naharitra ela indrindra tamin'ny tantaran'ny anglisy.
Prince Philip, ny Duke of Edinburgh, dia maty tamin'ny faha-99 taonany tao amin'ny Buckingham Palace androany.
Raha dinihina ny valanaretina coronavirus dia nangataka ny olona ny Royal Family mba handinika ny fanomezana ho an'ny fikambanana mpanao asa soa fa tsy hamela voninkazo ho fahatsiarovana ny Duke, ary misy boky fiaraha-miory amin'ny Internet natomboka ao amin'ny tranokalan'ny mpanjaka ofisialy ho an'ireo maniry handefa hafatra.
Queen Elizabeth sy Prince Philip
Raha niresaka tao amin'ny Downing Street ny praiminisitra Boris Johnson dia nanampy fa ny Duke dia "nahazo ny fitiavan'ny taranaka maro teto amin'ny Fanjakana Mitambatra, manerana ny Commonwealth, ary manerantany."
Fanambarana iray navoakan'ny Lapan'i Buckingham, taorian'ny misasakalina, niresaka momba ny “alahelom-po lalina” an'ny mpanjakavavy taorian'ny fahafatesany ao amin'ny Windsor Castle ny zoma maraina.
Ho fanomezam-boninahitra ny Duke, Westminster Abbey dia nandoa ny lakolosiny tenor isaky ny 60 segondra nandritra ny in-99 hatramin'ny 18:00 BST - hanomezam-boninahitra isan-taona ny fiainany.
Talohan'izay dia nidina hatramin'ny antsasaky ny sainam-pirenena ny saina tao amin'ny Lapan'i Buckingham ary nisy fampandrenesana iray napetraka teo am-bavahady mba hanamarihana ny fahafatesan'ilay Duke.
Nametraka fanomezana voninkazo ny olona teo ivelan'ny mariky ny faritr'i Londres, raha an-jatony kosa no nitsidika ny Castle Castle Windsor hanome fanajana.
Na izany aza, nanentana ny vahoaka ny governemanta mba tsy hanangona na hamela fanomezam-boninahitra any amin'ny trano fonenan'ny mpanjaka ao anatin'ilay valanaretina coronavirus.
Ny fizahan-tany any Shina dia hanangona $ 195 miliara dolara amin'ny tapany voalohan'ny taona 2021
Izay lazain'ny ETOA momba ny fitsipiky ny dia any UK vaovao sy ny Global Travel Taskforce